Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Transportation » Ọnụ ego tagzi ọdụ ụgbọ elu kacha mma nke Europe edepụtara site na € 5 ruo € 119
Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Ụgbọ ala mgbazinye • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ UK na -agbasa
Industrylọ ọrụ njem na njem nlegharị anya na Europe na -agbake. Enwere ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu maka tiketi ụgbọ elu, ebe obibi, ụgbọ njem, na ihe omume ma e jiri ya tụnyere 2020. Mmụba nke ọnụ ọgụgụ ntinye akwụkwọ maka ịnya ụgbọ ala na -ebuga na ọdụ ụgbọ elu dị na Europe pụtara ìhè.
Ọnụ ahịa dị elu maka ụgbọ ala mgbazinye na enweghị nzuzo na ụgbọ njem ọha bụ ihe doro anya.
Akuko tagzi ọdụ ụgbọ elu nke oge ọkọchị 2021 'ụgwọ tagzi n'ọdụ ụgbọ elu Europe' na -atụnyere ọnụego tagzi na ọdụ ụgbọ elu iri ise kacha nwee nsogbu na Europe.
N'ihi na akụkọ a na-enye ndị njem nghọta maka ọnụ ahịa nkezi maka ụgbọ elu tagzi ọdụ ụgbọ elu na-aga n'etiti obodo, ọnụ ahịa nke ndị tagzi eburula ụzọ etinyeghị na ntụnyere.
Ụgbọ ala mgbazinye dị oke ọnụ dabere na nkwupụta nke ndị njem na -agakarị.
Edepụtara ọnụego tagzi site n'ọdụ ụgbọ elu ruo na etiti obodo
Maka ndị na -enye ụgbọ ala mgbazinye, 2020 bụ afọ ọdachi. N'ihi na ọ nweghị ihe ọ bụla ndị na -ebubata ngwaahịa chọrọ manye ire nnukwu akụkụ nke ụgbọ mmiri ha. Ugbu a otu afọ gachara, nke a na -ebute nsogbu, n'ihi na ihe karịrị akụrụngwa a. Na mgbakwunye, ụgbọ ala ọhụrụ dị ole na ole n'ahịa n'ihi ụkọ mgbawa zuru ụwa ọnụ. N'ihi ụkọ ụgbọ ala mgbazinye, ịgbazite ụgbọ ala dị oke ọnụ karịa ka ọ dị na mbụ ụbọchị ndị a.
Ụgbọ njem ọha karịrị akarị
Ọ bụ ezie na ihe ji nwayọọ nwayọọ na -aga n'ụzọ ziri ezi na Europe, ụfọdụ ndị ka na -ala azụ ịkwaga n'ìgwè buru ibu ma ọ bụ ịnọ ndị ọzọ nso. Ụgbọ njem ọha nwere ike mepụta mmetụta adịghị mma, yabụ ụfọdụ ndị njem na -ezere ya. Ịgba njem tagzi dị oke ọnụ karịa ịnya ụgbọ njem ọha, agbanyeghị (echiche nke) nchekwa na -emeri ọnụ ahịa karịa karịa na mbụ.
Taxis ama ama na ọdụ ụgbọ elu Europe
Onu ogugu a na -ekwuchitere onwe ha dika Guus Wantia, onye nwe AirMundo, ụlọ ọrụ mere nyocha.
Maka ụlọ ọrụ tagzi, ịrị elu na -arịwanye elu nke ndị njem na ndị njem na -abịa n'oge kwesịrị ekwesị, ebe ha na -akwụ ụgwọ maka enweghị ndị njem azụmahịa.
Ego ole bụ tagzi site n'ọdụ ụgbọ elu gaa n'obodo?
Ọnụ ego Europe na -aga 112 n'ọdụ ụgbọ elu London Stansted ka 5 na Antalya, Turkey.
Ụgwọ tagzi na ọdụ ụgbọ elu 50 kacha ekwo ekwo na Europe Airport Country Ụgwọ tagzi KM / Maịl Ọnụahịa kwa KM
1 Ọdụ ụgbọ elu London Stansted UK 112 (95 GBP) 63 / 39.1 € 1.78
2 Ọdụ ụgbọ elu nke London Luton UK 106 (90 GBP) 55 / 34.2 € 1.93
3 Ọdụ ụgbọ elu Milan Bergamo Italy € 105 52 / 32.3 € 2.02
4 Ọdụ ụgbọ elu London Gatwick UK 100 (85 GBP) 47 / 29.2 € 2.13
5 Ọdụ ụgbọ elu Milan Malpensa Italy € 95 50 / 31.1 € 1.90
6 London Heathrow Airport UK 82 (70 GBP) 27 / 16.8 € 3.04
7 Osgbọ elu Oslo Norway € 77 (800 NOK) 50 / 31.1 € 1.54
8 Ọdụ ụgbọ elu Munich Germany € 75 38 / 23.6 € 1.97
10 Ọdụ ụgbọ elu Stockholm Arlanda Sweden 56 (575 SEK) 42 / 26.1 € 1.33
11 Chigbọ mmiri Amsterdam Schiphol Netherlands € 55 17 / 10.6 € 3.24
12 Airportgbọ elu Berlin Brandenburg Germany € 53 27 / 16.8 € 1.96
13 Ọdụ ụgbọ elu Rome Fiumicino Italy € 50 30 / 18.6 € 1.67
14 Ọdụ ụgbọ elu nke Zurich Switzerland € 47 (50 CHF) 12 / 7.5 € 3.92
15 Ọdụ ụgbọ elu Brussels Belgium € 45 15 / 9.3 € 3.00
16 Airportgbọ elu Helsinki Finland € 45 20 / 12.4 € 2.25
17 Ọdụ ụgbọ elu Copenhagen Denmark € 40 (300 DKK) 10 / 6.2 € 4.00
18 Ọdụ ụgbọ elu Geneva Switzerland € 37 (40 CHF) 6 / 3.7 € 6.17
19 Paris Orly ọdụ ụgbọ elu France € 37 18 / 11.2 € 2.06
20 Ọdụ ụgbọ elu Vienna Austria € 36 20 / 12.4 € 1.80
21 Egbọ elu Edinburgh UK 35 (30 GBP) 13 / 8.1 € 2.69
22 Manchester Airport UK 35 (30 GBP) 14 / 8.7 € 2.50
23 Ọdụ ụgbọ elu Barcelona Spain € 35 15 / 9.3 € 2.33
24 Ọdụ ụgbọ elu Athens Greece € 35 34 / 21.1 € 1.03
25 Airportgbọ elu Frankfurt Germany € 33 12 / 7.5 € 2.75
26 Ọdụ ụgbọ elu mara mma France € 32 7 / 4.3 € 4.57
27 Airportgbọ elu Stuttgart Germany € 32 13 / 8.1 € 2.46
28 Ọdụ ụgbọ elu Hamburg Germany € 30 11 / 6.8 € 2.73
29 Ọdụ ụgbọ elu Madrid Barajas Spain € 30 17 / 10.6 € 1.76
30 Ọdụ ụgbọ elu Grana Canaria Spain € 30 21 / 13 € 1.43
31 Ọdụ ụgbọ elu Düsseldorf Germany € 28 9 / 5.6 € 3.11
32 Gbọ elu Dublin Ireland € 27 12 / 7.5 € 2,25
34 Ọdụ ụgbọ elu Porto Portugal € 25 16 / 9.9 € 1.56
35 Ọdụ ụgbọ elu Istanbul toro toro 25 (NGWA 250) 50 / 31.1 € 0.50
36 Istanbul Sabiha Gökcen Air. toro toro 25 (NGWA 250) 50 / 31.1 € 0.50
37 Ọdụ ụgbọ elu Prague Czech Rep. € 24 (600 CZK) 16 / 9.9 € 1.50
38 Ọdụ ụgbọ elu Malaga Spain € 23 10 / 6.2 € 2.30
40 Ọdụ ụgbọ elu Alicante Spain € 22 11 / 6.8 € 2.00
41 Ọdụ ụgbọ elu Budapest Hungary € 21 (7300 HUF) 22 / 13.7 € 0.95
42 Ọdụ ụgbọ elu Palma de Mallorca Spain € 20 10 / 6.2 € 2.00
43 Ọdụ ụgbọ elu Moscow Vnukovo Russia € 20 (1700 RUB) 30 / 18.6 € 0.67